| | ဧပြီလ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးခင်ညွန့် ဆန္ဒမဲ လာရောက်ပေးစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းနေသည်ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနှင့် အရှင်ဂမ္ဘီရအာဖဂန်နစ္စတန်မှ အာဏာခွဲဝေရေး နမူနာရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်လာနိုင်မလားအာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည် လာမည်
48 Responses LeaveaReply Cancel reply
pnwara November 2, 2012 - 4:35 pm စစ်ထောက်ပြုတ်ကြီး ဘာဘဲ လုပ်လုပ် စိတ်မ၀င်စားဘူး – ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူ အာဏာရှိစဉ်က တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတာ လုပ်ခဲ့တာ ဘာတခုမှ မရှိဘူး။ တိုင်းပြည်လူထုကို ထောက်လှမ်းရေး ယန္တရားကြီးနဲ့ ဖိနှိပ် ရက်စက်ခဲ့တာဘဲရှိတယ်။
Reply ally November 2, 2012 - 7:09 pm အမျိုးသား နှိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးက အူကြောင်ကြားစကားလုံးပါ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ပိုပြီးလိုက်ဖက်အောင်ခေါင်းပေါင်းအဝါပေါင်းပြီး ပစ္စတိုအတုတလက်ခါးကြားထိုးပြီးအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖက်ရှင်တခုပါထွင်ဖို့အကြံပြုပါရေစ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကိုအထင်ကြီးလေးစားသူများလည်းဆင်တူဝတ်စားပါဝင်ဆင်နွှဲနှိုင်ကြပါတယ်။
Reply ဘကြီး November 4, 2012 - 3:50 pm သူက သမ္မတလုပ်လို့ မဖြစ်နိုင်ပါ ပြည်သူကလည်း မတင်မြှောက် ဘူးဆိုတာ သူသိမှာပါ ဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စမှာတော့
Reply Tin Maung Lwin November 2, 2012 - 7:35 pm ရှေးတစ်မျိုးပြော၊ နောက်တစ်မျိုးပြောနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ပီသပါပေတယ်။ ခင်ဗျားတို့တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးက လုပ်ခဲ့သမျှတွေကို ဘာတွေနဲ့ သင်ပုန်းချေမလဲ။ ခင်ဗျား အာဏာရှိစဉ်ကာလကို တွေးကြည့်ရင် ရင်နာလွန်းလို့ပါ။ အမျိုးသားကောင်းစားရေးအတွက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားတွေးတောလာပုံကို ကျွန်တော်လေးစားပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ဟန်ချက်ညီစွာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အချိန်ကောင်းလေးကို ခင်ဗျားတို့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း တွေကြောင့် မပျက်စီးစေချင်ဘူး။ သစ်ခွလေးစိုက်ပြီး၊ တရားနဲ့မွေ့လျှော်တော့မယ် ပြောခဲ့ပြီး ခုမှ ဘာစိတ်ကူးထပေါက်တာလဲ။
Reply u shein November 2, 2012 - 8:03 pm အ၇င်ကတော့ မကောင်းခဲ့ပါဘူး၊အာဏာ၇ှိနေ၇င်ဆက်ဆိုးနေအုံးမဲ့သူလို့မြင်ပါတယ်၊နားသင့်ပါပြိ၊ငရဲမှာဆက်ခံပါ။
Reply ဘဂျမ်း November 2, 2012 - 8:22 pm တော်ပါတော့ ကိုညွန့် ရယ် တော်ပါတော့ တော်ပါတော့။
Reply khin nay zaw November 2, 2012 - 9:42 pm What is National political ?
Reply kyaw November 2, 2012 - 9:45 pm this SOB is to be trialed first . then he can talk later.
Reply Maung Maung Kyaw Win November 3, 2012 - 8:33 am Here comes another person who want to save people of Burma.The problem is who will accept this guy whose misdeeds is unforgettable and unforgiven by the people. In fact, he must serve time in the prison for his crime before he can utter the holy words. If he can prove himself that he isaman who can stay above the law, how can he be welcome into the civilized community. How can we propose the Hluttaw to take action on criminals like Khin Nyunt and his followers including all the Kyantphut members when the position of Hluttaw Chairman is held by Shwe Mahn. Suppose Shwe Mahn agrees with the proposal and approves for taking action, other criminals will point out “Shwe Mahn, you are the first man that deserve the sentences. Only then we will follow suits.” So there must bearighteous MP who step forward and speak out in the Parliament that Law and Order must be maintained first and truth shall not be hidden and first and foremost all the criminals must put on trial.
Reply khin nay zaw November 2, 2012 - 10:01 pm We can do one thing is wait and see .
Reply အောင်ကျော်သက် November 2, 2012 - 10:56 pm ကျွန်တော် ၀မ်းမသာပါ… သာကူးကြီးဖြစ်ပါသည်.. အခုထိတိုင် သူ့သားများ မြန်မာပြည်ရဲ့စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကြိုးကိုင်နေတုန်းပါ..မယုံရင်indonesia နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ company တွေကို စိစစ်ပါ…အစိုးရက မသိတာလား..သက်သက်ပေးလုပ်နေတာလား…စိစစ်ကြစေချင်ပါသည်…တကယ်တော့ လက်ရှိအစိုးရကိုလဲ…ယုံလိုမရသေးပါ..ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်..သန်းရွှေတို့..မောင်အေးတို့ ခင်ညွှန့် တို့ နဲ့ ပတ်သတ်နေတာတွေ မြန်မာ့စီးပွားရေးလောကမှာ ဒုနဲ့ဒေး အုပ်စိုးနေပါသေးတယ်..ပြည်သူတွေသာ ဆင်းရဲနေတာပါ..သူတို့တွေက လုပ်စားနေတုန်းပါ…
Reply Tar Yai November 2, 2012 - 10:58 pm ခင်ညွန့် ခင်ဗျား ကို ချီးထုတ်နဲ့ ပေါက်မယ် ထွက်လာခဲ့ ခင်ဗျားတို့ လုပ်ခဲ့ တာတွေတရားဝင်မတောင်းပန်သရွေ့—- ပဲ မဖော်ပြမှာဆိုးလို့ ကိုယ့်ဘာသာဆင်ဆာဖြတ်တယ်။ ပြည်သူတွေ ကိုယ်ပြောချင်တာလေးတွေဖြည့်ဖတ်ကြ
Reply Moe Aung November 3, 2012 - 8:02 am Just shut him up
Reply MTK November 2, 2012 - 10:59 pm Hi, Khin Nyunt,
Reply Moe Aung November 3, 2012 - 8:04 am Shut him up. He was the one responsible for killing Myanmar people and damaging the country.
Reply thein min tun November 2, 2012 - 11:06 pm nar ti tal tu lote mae amyo tar yae ka
Reply ဘာဘာညာညာ November 2, 2012 - 11:15 pm အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတို့ .. အခြောက်နိုင်ငံရေးတို့ရော မလုပ်ဘူးတဲ့လား .. Reply လိုရာစိုး November 3, 2012 - 1:51 am သိပ်တော့မဆန်းပါ။
Reply ကျော် November 3, 2012 - 6:24 am လွတ်နေတဲ့ ကာလပေါ် ငရဲခွေးကြီး (တေ-ာင်) ဟာသူပေါ့ဗျာ
Reply U Maung Maung November 3, 2012 - 6:29 am What is happening in Myanmar ?
Reply u aye November 3, 2012 - 7:39 am HE NEVER REGRET FOR HIS FOUL DOING IN PAST 20-YEARS. LET HIM TRY POLITICAL FIELD AND HE WILL KNOW. PEOPLE WANT TO RECORD THE REAL HISTORY OF HIS ERA 20-YEARS.
Reply Bo Bo November 3, 2012 - 9:47 am သူကိုဘာလို့လွှတ်တာလည်း
Reply သားကြီး November 3, 2012 - 9:50 am လွတ်ထားပေးလို့အတင့်ရဲးလာတယ်
Reply observer news agency November 3, 2012 - 10:07 am he is testing the public response.
Reply Win November 3, 2012 - 11:49 am ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (ဟောင်း)ခင်ညွှန့်နှင့် အတူ ဗမာ-မွတ်ဆလင်များလေယာဉ် စင်းလုံးငှား၍ လာရောက်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်း စစ်တွေမြို့နေ ရခိုင်ရော မွတ်ဆလင်ပါ မေ့မရနိုင်သေးပါ။
Reply THURA KYAW WIN November 3, 2012 - 12:26 pm How did they found USDP party from USDA? Ha ha ha…
Reply pps12345 November 3, 2012 - 2:08 pm နိုင်ငံရေး မလုပ်ခင် ကိုယ်မွေးခဲ့တဲ့ ခင်ရွှေနှင့် ဌေးမြင့်တို့ တိုင်းပြည်ကဘယ်လို ပိုက်ဆံချေးပြီး ဘယ်လို ဒေါ်လာဈေးကစားခဲ့လည်း ဆိုတာတွေ။ ထောက်လှမ်ရေးတွေ အမိန့် နှင့် လှမ်းလက်ဝေခံ ကုန်သည်တွေ နယ်စပ် နှင့် ဆိပ်ကမ်းမှာ အပျာက် ရိုက်ပြီး မြန်မာစီးပွားရေး ကို ဘယ်လို မိုလိုပိုလီ လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ၊ နောက်ပြီး ပြန်တမ်းဝင် အဆင့် အရာရှိတွေကို တပ်ကြပ်ကြီးလောက် အဆင့် က ဘယ်လိုပညာပြခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ ဝတွေနှင့် ပေါင်းပြီး ဘိန်းငွေတွေ ဘယ်လို ခဝါချခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကို ပြန်လည် ဆန်းဆစ် သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်အမှား ကို်ယ်သိမှ တိုင်းပြည် အတွက်လုပ်နိုင်မှာပါ။ နိုင်ဝင်း ဘယ်လို အကြံအဖန် လုပ်ခဲ့တာတွေပါ ပြန် လည်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်
Reply yamahta November 3, 2012 - 2:17 pm yamahta,3rd,nov. 1:46 pm
Reply meddey November 3, 2012 - 3:03 pm Khin Nyunt was responsible for custodial deaths to occur and committed other extrajudicial killings, disappearances, rape, and torture. He ordered to detain civic activists indefinitely and without charges. He encouraged using rape as suspression tools …and many more.
Reply ငတေ November 3, 2012 - 4:33 pm မင်း ဝတ် လည်တာနားမလည်သေးဘူးလာ
Reply ခခံ November 3, 2012 - 4:39 pm ဂဒါဖိ. ဆက်ဒမ်. သက်ဆင် မိုဘာရက်
Reply ထက်ထက် November 3, 2012 - 4:42 pm ခင်ညွန့်ရေ ရိုဟင်ဂျာ ကိတ်စ မင်းဦးဆောင်ကြိုး
Reply ကိုဇော် November 3, 2012 - 5:40 pm မျက်နှာလည်းမမြင်ချင်တော့ပါဘူး။ အသံလဲမကြားချင်တော့ပါဘူး၊ ဒင်းတို့ တတွေမင်းမူ ခဲ့လို့ မြန်မာတွေ စရိုက်ပျက် ဆင်းရဲတွင်းက မထွက်၊ လူရုပ်သူရုပ်တောင် မပေါ်နိုင်တော့တာ။ ဘယ်သွားသွား မြန်မာဆိုရင် ဦးနှောက်သေးတဲ့ကောင်တွေ၊ လူ့ အဆင့်အတန်းမမှီတဲ့ ကြုံရာပျော် လောက်တွေအဖြစ် အထင်သေးခံခဲ့ရတာ ဒင်းတို့ တတွေကြောင့် ဆိုတာ အရှက်တရား ရှိရင် သိတတ်ခဲ့ရင် နေရာမှာတင် လဲသေလိုက်ဖို့ ကောင်းနေပြီ။ အဘ၊ အဘ နဲ့စားနေကြ ကြောင်ဖားကြီးရေ ပြည်သူတွေလဲ သနားပါဦး။ သေတဲ့အထိ မင်း လုပ်ချင်နေသေးတုန်း ပါလား………
Reply ကိုဇော် November 3, 2012 - 5:44 pm အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလဲမလုပ်ပါနဲ့ ။ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးလဲမလုပ်ပါနဲ့ တော့။ ဒီသတင်းဖတ်ရတာနဲ့ တင် အော်ဂလီဆန်လွန်းလို့ ပါ။ တော်ပါတော့ ကိုခင်ညွှန့် ရယ်။
Reply nay myo November 3, 2012 - 6:00 pm ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ . လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လူတွေထက်တော့ ဦးခင်ညွန့်က အတွေ့အကြုံပိုရှိတယ်. ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေက ဦးခင်ညွန့်ကိုပဲ လက်ခံကြတာ . KIO ကိစ္စကိုတော့ ဦးခင်ညွန့်က ၀င်ရောက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲ . ..
Reply ကျော် November 4, 2012 - 1:04 pm အတွင်းကျကျမသိရင်တော့ အဲဂလို ထင်ကြတာပဲလေ
Reply thihamin November 4, 2012 - 5:23 am နေ၀င်း၊ စောမောင်၊ သန်းရွှေနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားကို လည်ပတ်
Reply winswe November 5, 2012 - 9:55 am With blood-stained hands, how dare Khin Nyunt show his face to pubic.
Reply ကိုလူမှန် November 5, 2012 - 10:43 am တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးနှင့်စားဝတ်နေရေးချောင်လည်အောင်အမျိုးသားနှိင်ငံရေးလုပ်မယ်တဲ့
Reply THAN HTIKE November 5, 2012 - 3:23 pm ကျွန်တော်ကတော့ မီဒီယာကို အပြစ်တင်ချင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလူ့အကြောင်းကို သတင်းအဖြစ်နဲ့ ပြည်သူကို တင်ပြချင်ရတာလဲ? ပြည်သူဝယ်ဖတ်အောင် ရောင်းကောင်းအောင်အတွက် ဦးစားပေးမယ်ဆိုရင် အညံ့စားမီဒီယာဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုသတင်းမျိုးထွက်လာအောင် အင်တာဗျူးလည်းမလုပ်သင့် ၊ ဂျာနယ်ထဲ ၊ အင်တာနက်ထဲ မည်သည့်ထဲမှ မထည့်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်…။
Reply khun November 5, 2012 - 4:12 pm ဦးခင်ညွှန့် ဘာလဲ…..
Reply ညိုကြီး November 5, 2012 - 7:11 pm အမျိုးသားနိူင်ငံရေးဘဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြ ပြီးရင် ဘုရားစိန်ဖူးတော်တွေမဖြုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိူင်မလဲ ကျုပ်ကတော့နိင့်ငံရေးသမားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဟောင်းအမွှေအနှစ်တွေကိုတော့တန်းဖိုးထားပါတယ်။အရင်ကတည်းကခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်တာတရားမမျှတခဲ့လို့နိူင်ငံတကားမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကျွန်ခံနေရတာ။ခင်ဗျားတို့တွေပြည်သူလူထုတွေလိုနေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင်တခါလောက်အလုပ်လုပ်ကြည့်ပါလား။ခင်ဗျားတို့မှာစာနာတတ်တဲ့နှလုံးသားလုံးဝမရှိကြပါဘူး။ဝဋ်ဆိုတာလည်စမြဲပါ ခင်ဗျားတခါလည်ပြီးပါပြီးဘယ်လိုခံစားရလဲ?ကံကောင်းလို့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရတာ။နောက်တခါဆိုခင်ဗျာကံမကောင်းနိူင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားစိန်ဖူးတော်တွေယူခဲ့လို့ပဲ။ဝဋ်နာကံနာဆိုတာကြားဖူးမှာပေါ့ဦးခင်ညွန်နှင့်ဦးသန်းရွှေ ဘဝမကူးဘူးနော်ဒီဘဝမှာဘဲခံစားရမှာနော်။ဘုရားတရားလဲမမေ့နဲ့အုံးကျွန်တော်လဲမကယ်နိူင်ဘူး
Reply Andrew Kham November 6, 2012 - 7:24 pm I agree with U Win Tin. Natoinalism ( Amyotha Naing Ngan Yay ) ) isapoison for the development of the country and the enemy of unity.
Reply စနေသား November 6, 2012 - 10:55 pm အခုလိုပြောနေကြတဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့သာ ဗိုလ်ခင်ညွန့်နေရာရောက်ရင် ဒီထက်တောင် ဆိုးမယ်ကောင်တွေ…ကိုယ်ကကော နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီလဲ…ကိုယ်မျက်ချေး ကိုယ်ပြန်ကြည့်ကြပါဦး…သူများကိုဝေဖန်နေမယ့်အစား ကိုယ်နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုပေးဆပ် ကြမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားတာပိုကောင်းပါတယ်..
Reply Tues Boy November 9, 2012 - 9:19 am Boy,we are not complaining to your step papa.Just protecting.Stopping this bullock to not making any rouble again to civilian.Can you guess the opposite meaning of “Chee Kyuu Htite Thu Ko Chee Kyuu Chin The~ Mingalar Tapar Phick Ei”?
Reply ဇဝါ November 7, 2012 - 12:04 pm အဘ ဘာလိုချင်လို့လည်း
Reply tuntunko December 29, 2012 - 8:24 pm အခုပဲ မလုပ်တော့ဘူးပြောလိုပြော၊ ဘယ်သူမှမယုံကြနဲ့ နော်။
Reply zawyehtut October 29, 2013 - 10:22 pm သူများကို အပြစ်တွေပြောချည်း မစဉ်းစားနေကြပါနဲ့။အကောင်းမြင်ဝါဒလေးကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် စပြီး မွေးမြူကြည့်ကြပါလား။ကုသိုလ်ရပါတယ်။ပ္ပစ္စုပ္ပန်တိုင်း မှာတည့်တည့်ကြည့်ပါ။သင့်အတွက်ရော တိုင်းပြည်အတွက်ပါ အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဥပမာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုကြည့်ပါ။